Homemade HEPA sefa: chii, kuti inogadzirwa sei uye ndeyei | Green Renewables
Homemade HEPA sefa
Kuva nemhepo yakachena munzvimbo dzakavharwa mumba mako, kubasa uye kazhinji kwakakosha kune hutano hwedu. Kunyange zvazvo tisingagoni kuzviona, kune twunhu twakawanda twakarembera mumhepo zvinogona kukonzera kusawirirana nenyama uye kurwara. Saka chidzidzo ichi chinokuratidza nhanho nhanho nzira yekukurumidza uye nyore kuvaka yako wega mhepo yekuchenesa imba nayo Homemade hepa sefa.
Muchinyorwa chino tichakuudza maitiro ekuvaka HEPA sefa yepamba uye kuti inobatsira chii.
1 kusvibiswa kwemhepo kumba
2 Chii chinonzi HEPA sefa yemba
3 Magadzirirwo emumba HEPA sefa
4 Nzira yekusarudza fan yekupedza
5 Mazano ehutano hwakanaka hwemhepo
kusvibiswa kwemhepo kumba
Isu tinowanzo kukoshesa kuti mhepo yemumba medu kana kubasa haina kusvibiswa zvishoma pane mhepo iri kunze. Zvisinei, kunze kusvibiswa uku kunowedzera kupararira, uye munzvimbo dzakavharwa isu tinoratidzirwa kune yakanyanya kuwanda yechepfu makomisheni akadai se:
Molds, mite, mabhakitiriya, mavhairasi, nezvimwe.
Mishonga yemhepo yemumba yakanakira kurwisa kusvibiswa kwemhepo uye kuvandudza kunaka kwemweya iwe nemhuri yako unofema mazuva ese.
Chii chinonzi HEPA sefa yemba
Sefa yeHEPA inzira yekuchengetedza yezvimedu zvinoputika zviripo mumhepo, Kazhinji yakagadzirwa nefiberglass. Idzi faibha dzakarongwa zvisina tsarukano dzakatsetseka zvekuti dzinogadzira network inochengeta makemikari anosvibisa.
HEPA inomirira kuti “High Efficiency Particle Arrester”, zvichireva kuti “High Efficiency Particle Arrester” muchiSpanish, uye anonziwo mafirita akazara. Dzakagadzirwa neCambridge Filter Company muna 1950 kuti dzishandiswe muindasitiri yemauto kunyanya kurwisa zvinosvibisa zvakagadzirwa pakagadzirwa bhomba reatomu.
Parizvino HEPA mafirita anoshandiswa munzvimbo dzese: indasitiri yezvekudya, zvemagetsi, zvemishonga, makemikari, mune zvekurapa mukamuri yekuvhiya, kuzorodza mweya mundege uye kunyangwe kumba. Kazhinji, chero kupi kunodiwa kuchena kwemhepo kwepamusoro.
Kunyange zvazvo mafiber ari pakati pe 0,5 ne 2 microns muhupamhi, meshes akarongwa zvisina tsarukano anochengeta tunhu tudiki munzira nhatu: Kana mweya wakatakura zvimedu ukapfuura nemaari. zvimedu zvinonamira pamambure pazvinokwesha pashinda. Zvimedu zvakakura zvinodhumhana zvakananga nemafibhi. Pakupedzisira, kupararira, uko kwakabatana nekufamba kusina kurongeka kwezvikamu zviri mumvura, kunobatsira pakunamatira kwavo.
Magadzirirwo emumba HEPA sefa
Michina yekuchenesa mhepo yemumba kana michina yakagadziridzwa inogona kusefa mweya seunowanikwa muchitoro chemidziyo, asi yakachipa. Zvinhu zvinodiwa pakuvakwa kwayo ndezvizvi zvinotevera:
Iwe unogona kushandisa imba yekugezera yekupedza feni kana imwe inoshandiswa kufefetera makamuri akavharwa.
HEPA 13 sefa. Inogona kutengwa sezvimedu zvevacuum cleaners nemidziyo yemhepo.
Kadhibhodhi bhokisi rine chivharo. Inokurudzirwa kushandisa kadhibhodhi kuita kuti iyo inochenesa igare yakasimba.
Mapanga uye/kana chigero.
Bata netambo uye insulating tepi.
Masefa mazhinji eHEPA Iwo anogadzirwa kubva anoramba achienderera mapepa eakavharira fiberglass musanganiswa. Zvinhu zvinonyanya kukosha zvekufunga nezverudzi urwu rwesefa dhayamita yefibers, ukobvu hwesefa uye kumhanya kwezvimedu. Pamusoro pezvo, iyo sefa ine chiyero (MERV chiyero) zvichibva pakugona kwayo kutora zvimedu zvehukuru hwakapihwa:
17-20: isingasviki 0,3 microns
13-16: 0,3 kusvika 1 micron
9-12: 1 kusvika 3 microns
5-8: 3 kusvika 10 microns
1-4: Kupfuura 10 microns
Nenzira iyi, HEPA 13 sefa kana Kirasi H guruva sefa inobata 99,995% yezvikamu zvakakura kupfuura 0,3 microns zvinokuvadza kuhutano.. Saka nekudaro, iwo akanyatsokodzera kusefa mold spores, guruva mite, mukume, carcinogenic guruva, aerosols, uye hutachiona hwakaita sebhakitiriya nemavhairasi.
Nekune rimwe divi, kushanda kwayo kunosanganisira kubatwa kwezvimedu zvinokuvadza kuburikidza ne:
Airflow interception: zvimedu zvinokwesha zvichipikisa uye zvinonamatira kune fiber dzesefa.
Direct hit: Zvimedu zvakakura zvinodhumhana uye zvinobatwa. Iyo idiki nzvimbo iri pakati pemafiibha nekumhanya kwemhepo, inova yakakura kuita.
Kusiyanisa: Iwo madiki madiki anodhumhana nemamwe mamorekuru, achidzivirira kuti asapfuura nepasefa. Zvinowanzoitika kana mhepo inoyerera ichinonoka.
Nzira yekusarudza fan yekupedza
An extractor fan yakakosha mukamuri isina mhepo uye chikamu chakakosha chekuchenesa mweya. Pakusarudza iyo, zvinotevera zvinhu zvinofanirwa kuverengerwa:
Kuyerera kwemhepo kunofanirwa kuve nechokwadi chekufemesa kwakakwana uye kudhirowa. Kazhinji, iyi inofanira kuva ka6 kusvika ku10 yevhoriyamu yose yekamuri paawa, kunyange zvazvo 4 kusvika ku5 ichirumbidzwa mumakirasi nemaraibhurari, 6 kusvika ku10 mumahofisi nedzimba dzepasi, uye 10 mudzimba dzokugezera nomukicheni. 15 Kuti uverenge mudonzvo, unofanira kuwedzera m3 yekamuri (kureba x kureba x upamhi) nenhamba yekuvandudzwa kunodiwa paawa. Semuenzaniso, kamuri ye 12 m2 uye kureba kwe2,5 m (30 m3) inoda kuyerera kwe120 kusvika 150 m3 / h, nepo hofisi yeiyo cubic mita inoda kuyerera kwe180 kusvika 300 m3 / h.
Simba remudonzvo rinowanzova pakati pe8 ne35 W, uye sarudzo yako ichaenderana nekamuri iyo ichaiswa. Mukicheni, somuenzaniso, simba rakawanda rinodiwa nekuda kweutsi hunogadzirwa apo zvokudya zvinogadzirwa.
Noise mwero haifanire kudarika 40 decibels kuitira kuti usatsamwise, asi ramba uchifunga kuti kana simba rakakwirira, ruzha rwakawanda ruchagadzirwa.
Mazano ehutano hwakanaka hwemhepo
Pamusoro pekuvaka yako wega air purifier, zvinokurudzirwa kutevedzera akateedzana matipi anozobatsira kuvandudza kunaka kwemweya mune chero kamuri:
Vhura mahwindo nguva dzose kuitira mhepo. Kana pasina mahwindo, panofanira kunge paine mechanical ventilation.
Kura zvirimwa zvemukati zvinobatsira kuchenesa nekuvandudza kunaka kwemhepo.
Inobvisa hunyoro hwakawandisa kudzivirira mold uye mildew buildup, kunyanya munzvimbo dzakaita sedzimba dzekugezera.
Inodzivirira kuunganidzwa kweguruva uye kuchenesa makemikari, kusarudza zvimwe zvigadzirwa zveecological sevhiniga nesoda yekubheka.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve maitiro ekugadzira HEPA sefa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Homemade HEPA sefa